Zvinoita sekunge munhu wese anoziva nezve Zoom nekuti zviri nyore kushandisa uye mahara kune chero munhu kuitisa misangano chaiyo, makirabhu edhijitari, kusangana kwemhuri uye kunyange michato.
Zvisinei, pane zvimwe zvinhu mu vhidhiyo musangano software kuti havazi vese vanoziva zvakafanana Zoom breakout makamuri or tsika Zoom kumashure.
Chimwe chezvinhu zvakajairika izvo zvinogona kuvhiringidza kune yekutanga-nguva Zoom mushandisi idiki dhijitari ruoko. Ruwoko urwu runokutendera kuti utaure neanopinda musangano kuti uvanyevere kuti ungade kugovana zvinokunetsa kana kupa kune iyo nyaya yacho.
Kana iwe usingazive kwekuwana Zoom ruoko, unogona kuzviwana uchisimudza ruoko rwako panyama nguva dzese uye uyo anokugamuchira anogona kusakuona, kunyanya mumusangano mukuru.
Tinokufambisa kuburikidza nezvose zvaunoda kuti uzive nezve kusimudza ruoko mumusangano weZoom pakombuta yako kana nhare mbozha.
Kana iwe uri kuenda kuZoom musangano kubva kune yako Windows kana Mac komputa, shandisa rairo pazasi kusimudza ruoko uye kukumbira mukana wekutaura.
Simudza Ruoko paZoom on Windows PC kana Mac
Kuti utange, tangisa Zoom kuburikidza neapp kana pabhurawuza rako uye sarudza Joinha Musangano semubatanidzwa.
chitsamba: Iwe haugone kuwana iyo Simudza Ruoko sarudzo kana iwe uri musangano musangano.
sarudza Vakwikwidzi kubva pamusangano zvinodzora pazasi kwescreen yako.
sarudza Simudza Ruoko kubva pane akati wandei sarudzo dzinoonekwa mukati meVadzidzi vepaneru.
chitsamba: Pane mapfupi ekhibhodi iwe aunogona kushandisa pane yako Windows PC kana Mac kusimudza ruoko rwako muZoom. Pane yako Windows PC, tinya Alt + Y uye shandura iyo Simudza Ruoko sarudzo ku On or Off. Iwe uchaona iyo diki yebhuruu ruoko icon pamberi pezita rako kana sarudzo yacho yabvumidzwa.
Ongorora: Kana iwe uri uchishandisa Chromebook, tendeukira kumutungamiriri wedu pa maitiro ekushandisa Zoom pane Chromebook.
Simudza Ruoko Rwako Zoom pane Android kana iPhone
Kana iwe uri kushandisa Zoom kubva kune yako Android smartphonee kana iPhone, unogona kusimudza ruoko rwako uchishandisa Zoom app yemafoni nhare.
Kuti uite izvi, vhura iyo Zoom app pafoni yako, sarudza Joinha Musangano (semubatanidzwa), uye tora More kubva pamusangano zvinodzora pazasi kurudyi kwescreen.
pombi Simudza Ruoko kubva pane popup menyu, uye uyo anomiririra musangano anozoziviswa kuti iwe wakasimudza ruoko.
chitsamba: Kana ruoko rwako rwe digital rwasimudzwa, iwe uchaona shoma bhuruu ruoko pahwindo rako, uye iye anomiririra achaonawo ruoko padivi pezita rako. Zoom inonyora vatori vechikamu zvichienderana nehurongwa hwavakasimudza maoko avo.
Maitiro Ekusimudza Ruoko muZoom Dial-In Kudana
Kana uchida Joinha Zoom musangano nekufona mukati nenhamba yefoni, nhanho dzaunotora kusimudza ruoko rwako zvakasiyana zvishoma.
Ukangopinda musangano, dial *9 pane dial pad yako yefoni kusimudza ruoko rwako, uye ita zvakafanana kudzikisa ruoko rwako.
Zvaunofanira Kuita Kana Iwe Usiri Kuwona Simudza Ruoko Sarudzo mu Zoom
Kana iyo Simudza Ruoko sarudzo isingawanikwe mumusangano wako weZoom, zvinogona kudaro nekuti musangano wemusangano wakaremara zvisina kutaurwa kana iwe uri mune yakazara skrini mamiriro.
Mune yakazara skrini mode, rezasi barbar inodzikiswa asi iwe unogona kuiburitsa pakombuta yako kana nhare mbozha nekufambisa mbeva yako pachiratidziri kana kubata iyo skrini. Kamwe bharaki painowoneka, sarudza kana tap Vakwikwidzi uye iyo Simudza Ruoko sarudzo ichaonekwa.
Kana mukokeri wemusangano akaremara zvisina tsananguro, hauzoone iyo Simudza Ruoko sarudzo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unogona kugara uchikumbira iyo inomiririra kuti igone iyo isingaite mhinduro kuti ikwanise Simudza Ruoko chimiro.
Kana iwe uri musangano wekutambira uye iwe unofanirwa kugonesa iyo Simudza Ruoko ficha kune vako vatori vechikamu vemusangano, iwe unogona kuzviita mukati meVatori vechikamu pani.
Kuti uite izvi, pinda muZoom pane browser yako uye sarudza Account My.
pasi Personal tab, sarudza Settings.
kuwana Musangano tab uye wozoderera pasi kune iyo Mhinduro dzisina kutaurwa kuita.
Shandura chinja on kugonesa isiri yemashoko mhinduro kune ako mamusangano vatori vechikamu.
Maitiro Ekudzikisa Ruoko Rwako muMusangano weZoom
Unogona kunge wakasimudza ruoko kana iwe netsaona wakarisimudza uye hauzive kuti ungadzikise sei. Chero zvingave zviripo, heano maitiro ekudzikisa ruoko rwako mumusangano we Zoom.
On your Windows PC kana Mac, sarudza Vakwikwidzi uye osarudza Ruoko rwezasi.
Iwe unogona zvakare kudzikisa ruoko rwako pane yako Android foni kana iPhone nekutepa More uye sarudza Ruoko rwezasi.
Kudzikisa ruoko rwako uchishandisa nzira pfupi yekhibhodi, tinya Alt + Y ako Windows PC kana Mac, wobva wachinja Ruoko rweZasi sarudzo ku Off.
chitsamba: Kana iwe uri musangano wekutambira, unogona kudzikisa ruoko rwemubatanidzwa nekusarudza Vakwikwidzi kubva pane zvinodzora musangano, uye wozorora pamusoro pezita remubatanidzwa uye sarudza Lower Ruoko. Pane yako Android foni kana iPhone, tinya pane iyo Vatori vechikamu tab, tinya pazita remushandisi, uye sarudza Ruoko rwezasi kubva pamapopu yemenyu.
Musangano wevatariri vanogona zvakare kuona vese vatori vechikamu vakasimudza maoko avo mumusangano weZoom nekusarudza iyo yakasimudzwa ruoko icon pachiratidziri, kana kutsvaga Raised Ruoko icon padhuze nevatori vechikamu muVatori vechikamu menyu.
Tora Tarisiro yeMusangano
Iyo yekusimudza ruoko ficha inzira inokurumidza uye yakapusa yekubata kumubati kumusangano weZoom, uchienzaniswa nekusimudza ruoko rwako rwenyama kana kunyaradza maikorofoni yako kukumbira kutaura. Tinovimba iwe wakakwanisa kuwana chimiro pane chako chishandiso uye ikozvino waziva kuti ungashandise sei kuti zvikunakire.
Tarisa uone zvakawanda zveedu Zoom magwara kusanganisira Zoom bvunzo kuti uite pamberi pemusangano wako unotevera or zvekuita kana maikorofoni yako Zoom isiri kushanda kuti ikubatsire kufamba neshoko.
3 Nzira dzekugovana iPhone kana Android Screen muMusangano weZoom